Sida Loo Yareyo Ka Tagitaanka Gaariga Wax iibsiga ee Boggaga Ecommerce | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Loo Yareyo Ka Tagitaanka Gaariga Wax iibsiga ee Boggaga Ecommerce
Sida Loo Yareyo Ka Tagitaanka Gaariga Wax iibsiga ee Boggaga Ecommerce
Ka tegista wax iibsigu inta badan kuma dhacdo dukaamada lebenka iyo hoobiye. Sababtoo ah sahlanaanta wax iibsiga ee internetka (ama laga yaabo sababtoo ah xaqiiqda ah in qofna uusan ku daawaneynin / ku xukumayn), tixgelintaani waxay dhab ahaantii khuseysaa kaliya markaad si gaar ah uga hadlayso dukaamada ecommerce.
Si loo geliyo dhibka ganacsiga e-ganacsiga, saddex ka mid ah afar ka mid ah gawaarida wax iibsiga ayaa laga tagay, iyo heerka gaariga la dayacay ayaa kor u kacay 2% sanadkii la soo dhaafay.
Celcelis ahaan, in ka badan 70% macaamiishaada suurtagalka ah ayaa ka tagaya baabuurtooda wax iibsiga. 😲 Fiiri sida tan loo hagaajiyo goobtaada ecommerce.Riix halkan Tweet
Ka tegista gaadhigu waxay ka dhigan tahay faraq weyn oo beddelaadyada suurtagalka ah. Tusaale ahaan, waxaa la ogaaday in 65% heerka ka tegista gaadhigu uu ka tago 97.9% farqi u dhexeeya beddelka, kaas oo ku kacaya suuqgeynnada celcelis ahaan $2 ilaa 4 tiriliyan sanadkii. Taasi waxay tidhi, Forrester Research waxay soo jeedinaysaa khasaaraha sanadlaha ah ee $ 18 trillion.
Waa maxay Ka Tagaya Dukaammada Dukaameysiga?
Ka tagis wax iibsigu waa marka macmiil suurtagal ah oo jooga goobtaada ecommerce uu ku jiro badhtamaha hubinta (ama uu ugu yaraan ku daray gaadhigooda) oo uu go'aansado inaanu wax iibsan. Tan waxaa badanaa lagu cabbiraa boqolleyda gaadhiyada laga tagey muddo wakhti ah. Waxaa saameyn kara UI xun, qulqulka hubinta, qiimaha jahawareer, aaminaadda summada, iwm.
Habka wax iibsiga onlineku wuxuu noqon karaa mid adag in la dumiyo ujeedada kor loogu qaadayo beddelka.
Daraasadaha qaar ayaa sheegaya in 75% booqdayaasha goobta ee ka tagay gaarigooda ay qorsheynayeen inay ku soo laabtaan goobta si ay wax u iibsadaan ama u sii wataan cilmi baaristooda. Dhab ahaantii, kaliya 2% macaamiisha ayaa u beddela booqashadoodii ugu horreysay ee dukaanka ecommerce, iyo 92% booqdayaasha ugu horreeya ma rabaan inay wax ka iibsadaan dukaanka xilligaas. Dhab ahaantii, waxay qaadataa qiyaastii shan xiriiriye celcelis ahaan ka hor inta uusan macaamiishu go'aansanin inuu ka iibsado celceliska ganacsiga.
Markaa halkii aad ka eegi lahayd ka tagistii gaadhiga wax iibsiga sidii iibkii hore, waa inaad taa beddelkeeda u eegtaa halbeeg lagu cabbirayo ujeeddooyinka wax iibsiga ee ugu dambeeya ee booqdayaasha degelkaaga.
Tirakoobka Ka-tagga Gaariga Wax-ka-iibsiga
Marka loo eego Machadka Baymard, kuwani waa sababaha ugu badan ee ay macaamiishu uga tagaan gawaarida wax iibsiga:
Kharashka dhoofinta qaaliga ah (55%)
Goobtu waxay rabeen inay xisaab sameeyaan (34%)
Habka hubinta dheer ama adag (26%)
Laguma aamini karo goobta macluumaadka kaadhka deynta (17%)
Mareegaha ayaa lahaa khaladaad/burbur (17%)
Aan ku filnayn xulashooyinka lacag-bixinta (6%)
Dabcan, waxaa jiri kara sababo kale oo iyaguna ciyaarta soo gala, sida la'aanta badeeco ku filan kaydka, hoos u dhaca daacadnimada summada, iyo khaladaadka hubinta.
Sababaha kale ee muhiimka ah ee ka-tagista carrada waxaa ka mid ah:
Lahaanshaha degel gaabis ah. Mareeg gaabis ah waxay kordhin kartaa ka tagista 75%, daacadnimaduna waxay hoos u dhacdaa 50% marka goobtaadu gaabis tahay.
Macaamiisha wax baadhaya 81% macaamiisha kaliya waxay baadhayaan goobaha ecommerce sababtoo ah waxay samaynayaan cilmi baaris online ah oo ku saabsan heshiisyada ugu wanaagsan ee la heli karo. 55% waxay ka raadiyaan alaabada Amazon iyo Pinterest labadaba, 79% waxay raadiyaan dhoofinta bilaashka ah, iyo 71% waxay qiimeeyaan khidmadaha dhoofinta iyo siyaasadaha.
Sidee loo Yareeyaa Ka Tagaya Alaabada Dukaameysiga
Si la mid ah hagaajinta heerka beddelka, waxa jira arrimo badan oo saamayn kara inta uu le'eg yahay heerka ka tegista gaadhigaaga wax iibsiga. Waa kuwan qaar ka mid ah tillaabooyin fudud oo ku saabsan sida loo yareeyo!
1. Dadaji goobtaada Ecommerce
Xawaaraha boggu waa mid ka mid ah dadaalka ugu muhiimsan ee hagaajinta bogga ee shabakad kasta. Macaamiisha waxay ka tagi doonaan mareegaha haddii ay qaadato in ka badan 3 sekan in la soo shubo. AliExpress waxay la wadaagtay in yaraynta wakhtiga culeyska boggooda 36% ay keentay 10.5% korodhka dalabaadka iyo 27% korodhka heerarka beddelka ee macaamiisha cusub. Dhanka kale, iyada oo la hagaajinayo wakhtiga wax bixinta 68%, wakhtiga culeyska 64%, iyo miisaanka bogga 46%, Ancestory.com waxay aragtay 7% korodhka beddelka.
Goobaha WooCommerce waxay noqon karaan kuwo si gaar ah u baahan maadaama ay soo saaraan xog badan, iyo sidoo kale codsiyada aan la keydin karin, sidaas darteed PHP adag iyo ilaha xogta ayaa looga baahan yahay meesha. Markaad dooranayso martigelinta WooCommerce, waa muhiim in la isticmaalo martigeliyaha weelka ku salaysan, sida Behmaster, kaas oo loo dhisay in lagu miisaamo kheyraadka go'doonsan.
Fikrado dheeri ah oo lagu dardargelinayo mareegahaaga:
Soo deji oo kaydi faylal kala duwan sida PDFs iyo MP3s.
Kaydi inta ugu badan ee macluumaadkaaga intii suurtogal ah. Waxaad dooran kartaa plugin caching, in kasta oo ay jiraan qaar ka mid ah martigaliyayaasha webka sida Behmaster, kaas oo gacanta ku haya kaydinta adiga (oo bixiya afar nooc oo kala duwan oo kaydin ah, si aad boot).
Kaydka WordPress - HIT, MISS, BYPASS
Isticmaal shabakada gudbinta nuxurka (CDN). Iyadoo ku xiran goobta, waxaan aragnay CDN hoos u dhaca guud ee waqtiyada culeyska in ka badan 50%!
Kordhi xogtaada WordPress. Markaad ka tirtirto plugin ka database-kaaga WordPress adigoo isticmaalaya habka caadiga ah, waxay caadi ahaan ka tagtaa miisaska iyo safafka xogtaada, taas oo, wakhti ka dib, ay hoos u dhigi karto website-kaaga. Marka goobtaadu aad u cuslaato, waxaad dooran kartaa inaad xaddiddo dib u eegista ama tirtirto kuwii hore. Waxaad sidoo kale u rogi kartaa miisaska MyISAM una rogi kartaa InnoDB, oo aad nadiifisid miiskaaga wp_options.
Haddii aad runtii rabto inaad dhex gasho dhammaan farsamooyinka kobcinta nitty gritty iyo tabaha, iska hubi inaad hubiso hagahayaga kama dambaysta ah ee ku saabsan sida loo dedejiyo boggaaga WordPress.
2. Yaraynta & Fududeynta Habka Hubinta
Ilaa 21% ka mid ah dadkii wax ka iibsanayay ayaa sheegay in sababta ay uga tageen gaadhiga wax iibsiga ay tahay in habka hubintu uu ahaa mid aad u dheer ama adag. Sida laga soo xigtay machadka Baymard, celceliska goob-ganacsiyeedka weyn ee ecommerce waxay ku kordhin kartaa heerka beddelaadkooda 35.26% iyada oo loo marayo naqshad hubineed oo wanaagsan.
Fikrado dhowr ah oo lagu fududeynayo hubinta:
Bixi hubin hal-tallaabo ah (sida Amazon) ama raadi siyaabo aad ku dhimi karto tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah si aad u hubiso.
Bixi hubinta martida 35% wax kala iibsiga intarneedka ayaa sida caadiga ah la tuuray sababtoo ah mareegaha ayaa uga baahan isticmaaluhu inuu sameeyo akoon ka hor inta uusan hubin. Qaar ka mid ah sababaha booqdeyaasha aysan u dooneyn inay sameeyaan akoon isticmaaleysa waxaa ka mid ah sirnimada, sanduuqyada iimaylka oo buuxa, waqti la'aan, iyo hubanti la'aanta iibka.
Hoos u dhig oo fududee hubinta Tan waxaa loo samayn karaa siyaalo kala duwan. Tusaale ahaan, Behmaster waxay ka saartaa carqaladaha boggooda hubinta iyagoo ka saaraya madaxa sare. Waxa kale oo aad arki kartaa meesha aad joogtid hawsha marka aad sii socoto.
Hubinta Ecommerce waa la fududeeyay
Dib u qaado talaabo aad si dhab ah uga fiirsato habka hubintaada hadda jirta: ha ahaato dhanka is xisaabinta ama tijaabinta isticmaalka. Ma jiraan wax gaar ah oo jahawareer ku ah? Ma jiraan wax beero ah oo aad baabi'in karto? Tijaabi isbeddellada cusub oo hubi inaad cabbirto saamaynta beddelaaddaada ka hor intaadan si buuxda u go'an.
3. Bixi habab lacag-bixineed Beddel ah
Markaad furto dukaanka ecommerce, waxaa suurtogal ah inaad naftaada u furto inaad ganacsi la samayso aduunka oo dhan. Ogaanshaha tan, waa inaad ogaataa in hal qaab oo lacag bixin ah aanu ku filnaan doonin macaamiisha dalal kala duwan. Waxaa laga yaabaa inaad ku darto siyaabo kala duwan oo lacag-bixineed oo kala duwan iyadoo ku xiran hadba meesha adduunka ay macaamiishaadu ku nool yihiin.
Stripe iyo PayPal (ku xiran xisaabaadka bangiga, kaadhadhka deynta, iyo kaararka deynta) waa qaar ka mid ah hababka ugu badan ee lacag bixinta ee dukaamada ecommerce ay aqbalaan. Hababka lacag bixinta ee cusub, soo socda iyo kuwa soo socda ee ka duwan kuwan waxaa ka mid ah Apple Pay, Amazon Pay, iyo Google Pay.
Isticmaalka Square? Fiiri boggayaga isbarbardhigga qoto-dheer ee barta blog: Stripe vs Square.
4. Tixgeli Bixinta Dhoofinta bilaashka ah
Sida laga soo xigtay Statista, maraakiibta qaaliga ah ayaa ah sababta ugu sareysa ee ay dadku uga tagaan baabuurtooda, laakiin marka loo eego Adeegga Fulintu, dhoofinta bilaashka ah maaha qodobka kaliya ee lagu tixgeliyo sawirida macaamiisha cusub. Qiimaha hooseeya waa sababta #1 sababta ay macaamiishu dib ugu soo booqdaan goobaha ecommerce.
Sababaha wax iibsadaa ay uga tagaan gaadhiyada
Markii la hubiyay, 78% jawaab bixiyaashii waxay sheegeen inay ka door bidaan rarista bilaashka ah dhoofinta degdega ah. Iyo 67% wakhtiga, macaamiishu waxay dooran doonaan habka rarista ee ka jaban midka ugu dhakhsaha badan (taas oo u dhiganta 2% macaamiisha). Intaa waxaa dheer, 58% macaamiisha ayaa diyaar u ah inay sugaan meel kasta inta u dhaxaysa 4-7 maalmood si ay u helaan shay ay ka iibsadeen online, laakiin iibiye online ah, waa inaad sidoo kale bixisaa wakhti la filayo ama taariikhda bixinta si aad u ilaaliso macaamiisha farxad.
Kuwa la waraystay, 58% waxay rabaan dhoofin bilaash ah ama qiimo dhimis ah, halka 28% ay rabaan noocyo kala duwan oo maraakiib ah.
Inkasta oo dhoofinta bilaashka ah ama degdega ah ay ku filan tahay dhiirigelinta kordhinta iibka, waxaa muhiim ah in la fahmo saameynta khadkaaga hoose sababtoo ah kharashka dhoofinta wuxuu cuni karaa 5% ama in ka badan qiimaha guud. Guud ahaan, kala badh ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee la waraystay ayaa sheegay in bixinta maraakiibta bilaashka ah ay korodhay faa'iidada.
Tafaariiqle ahaan, waa muhiim in la helo meesha macaan ee u dhaxaysa kordhinta kharashaadka iyo kordhinta iibka.
Halkan waxaa ah dhowr siyaabood oo tafaariiqleyaashu ay sidaas u sameynayaan marka la eego dhoofinta:
Bixinta dhoofinta bilaashka ah ee gaarsiinta caadiga ah, laakiin khidmadaha dheeraadka ah ee adeegyada qaaliga ah, sida dhoofinta degdega ah.
Ku dallaca dhoofinta alaabooyinka qiimahoodu yar yahay laakiin bixinta dhoofinta bilaashka ah ee alaabooyinka qiimaha sare leh.
Isticmaalka xamuulka qiimaha jaban iyo bixinta dhoofinta bilaashka ah haddii sidayaashan uu doortay macmiilku.
5. Ku Dhiiri kalsoonida Badbaado iyo Dib u eegis Websaydh Weyn
35% shakhsiyaadka ayaa ka tagi doona mareegaha haddii aysan u muuqan calaamad ammaan ah.
Haddii aad la yaabban tahay calaamado ammaan oo gaar ah oo la isticmaalo, sahan Baymard ah ayaa lagu ogaaday in calaamadda ugu kalsoonida badan ay ahayd Norton (35.6%), oo ay ku xigtay McAfee (22.9%), TRUSTe (13.2%), iyo BBB La aqoonsan yahay (13.2%).
Marka laga reebo in lagu daro calaamadaha amniga, ku dar astaamo dheeri ah oo amniga, sida sirta sirta ah iyo shahaadooyinka SSL (waa qasab — HTTPS hadda waa qodobka qiimeynta Google) si macaamiishaadu u ogaadaan inaad si sharci ah xiisaynayso ammaankooda iyo calaamaduhu' t kaliya show.
(Akhris dheeraad ah: sida loogu daro shahaadada SSL WooCommerce)
Waxa kale oo aad ka caawin kartaa macaamiishu in ay ka gudbaan laba-la-laabantoodii hore ee wax-iibsigaaga iyada oo loo marayo dib u eegista asaaga, taas oo muujinaysa in dukaankaagu yahay meel sharci ah oo lagu dukaameysto. 84% waxay aaminsan yihiin dib u eegista khadka tooska ah sida talooyinka gaarka ah. Samee hal abuur oo dhig macaamiishaada dib u eegista agagaarka goobtaada ecommerce. Dhig dib u eegistaada ugu fiican bogga hubinta si aad hoos ugu dhigto fursada in macaamiishu ka tagi karo gaariga.
Dib u eegista macaamiisha Ecommerce (Isha sawirka: TrustPilot Business)
6. Bixi waayo-aragnimo iibsi saaxiibtinimo oo Mobile-ka adag
In ka badan kala badh taraafikada shabakadda caalamiga ah waxaa loo aaneynayaa isticmaaleyaasha mobilada.
76% milkiilayaasha taleefannada casriga ah ee raadiya ganacsi waxay soo booqdaan maalinta gudaheeda; 28% ka mid ah raadintaas waxay keenaan iibsiyo. 59% booqashooyinka websaydhada ecommerce waxay ku jiraan aaladaha mobilada, oo leh xisaabinta dhaqdhaqaaqa mobilada ama 38% dakhliga ecommerce. Waxa ka mid ah saddexda aaladood ee ugu caansan ee loo isticmaalo wax-ka-iibsashada onlaynka, xisaabaadka moobilka ee heerka gaadhiga ugu sarreeya ee la dayacay (85.65%), vs desktop (73.07%), iyo tablet (80.74%).
Hal istaraatiijiyad oo aad u adeegsan karto si aad ugu wanaajiso saaxiibtinimada moobiilka ayaa ku lug yeelan karta isticmaalka Google AMP, kaas oo siinaya hab ay isticmaalayaashu u arkaan goobtaada si dhakhso ah iyagoo siinaya nooc ka mid ah. Waxaa jira dhowr plugins oo aad isticmaali karto si aad u dhaqaajiso shaqadan, sida AMP ee WooCommerce, iyo WP AMP. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad sidoo kale tijaabisaa tan si weyn maadaama AMP ay leedahay arrimo badan.
Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad tixgeliso hagahayaga hubinta in boggaaga WordPress uu u habeeyey tusmada-guud ee ugu horreeya ee Google.
Sida loo hagaajiyo Tagitaanka Gaariga Wax iibsiga ee Iimayllada Gaariga laga Tagay
Haddii macaamiishaadu ay weli ka tagaan gaadhiyadooda wax iibsiga si heer sare ah inkastoo dadaalkaaga ugu fiican ee goobta, waxaa jira war wanaagsan: waxaad weli dib u heli kartaa iyaga oo la kaashanayo iimaylada gaadhiga la dayacay.
Iimaylyada gaadhiga la dayacay waa kuwo waxtar leh oo waxtar leh. Waa kuwan qaar ka mid ah tirokoobyada iimaylka gaadhiga ee la dayacay si aad Moosend uga fiirsato:
Heerka furan: 45% emayllada ka-tagga gaadhiga waa la furay celcelis ahaan.
Guji illaa heerka: 21% emayllada waa la gujiyaa.
Heerka iskudhafka: 10.7% qaatayaasha ayaa dhameeyay iibsigooda. Marka loo eego Barilliance, iimaylada gaadhiga ee la dayacay waxay u horseedi kartaa 18.64% korodhka heerarka beddelka!
Waxaad samayn kartaa iimayladaada gaadhiga la dayacay iyadoo la kaashanayo bixiyaha suuqgeynta iimaylka iyo/ama goobta ecommerce-ka (tusaale ahaan, BigCommerce waxa ay bixisaa sifooyinka soo kabashada gaadhiga la dayacay ee gudaha ku dhex jira).
Intaa waxaa dheer, xalalkani waxay kaa caawin karaan fududaynta habka:
Waxaa sameeyay kooxda SkyVerge, lamaane rasmi ah oo WooCommerce ah, Jilt waxaa loo sameeyay si ay uga caawiso dukaamada ecommerce inay ka soo kabtaan iibkii lumay sababtoo ah ka tagistii gaadhiga wax iibsiga.
Jilt ecommerce WordPress plugin
Jilt waa plugin aad rakibtay. Waxay la midaysaa aaladaha sida WooCommerce, Soodejinnada Dijital ah ee Fudud, iyo Shopify. Marka aad isticmaalayso Jilt, waxa ay la socotaa macaamiisha imanaya oo ay daba gal ku samaynaysaa. Marka ay ka tagaan baabuurtooda wax iibsiga, waxay bilaabaysaa olole toos ah iimaylka si ay isugu dayaan inay soo noqdaan.
Falanqaynta Jilt (Isha sawirka: Jilt)
Hal shay oo weyn oo ku saabsan Jilt waa inay ku tusaan inta dakhliga dheeraadka ah ee aad samayn karto markaad gaadho macaamiisha aad lumiso. Qoraalkaas, waxa kaliya oo lagugu soo dalacayaa macaamiisha aad dhab ahaantii ku gaadhay ololahaaga. Waxaad sidoo kale yeelan kartaa Jilt si firfircoon kuugu abuurto kood qiimo dhimis gaar ah.
Conversio waa shirkad suuqgeyn email ah oo si gaar ah u bartilmaameedsata dukaamada ecommerce.
Conversio WooCommerce plugin
Waxay kuu oggolaanayaan inaad dirto iimaylo kasta oo ku habboon e-ganacsi, sida rasiidhada, iimaylada gaadhiga la dayacay, iimayllada daba-galka ah, faallooyinka alaabta, wargeysyada, iyo iimayllada jawaab-celinta. Conversio waxa ay soo bandhigtaa hambalyo iimaylka oo horay loo sii qorsheeyay, qayb xoog badan, iyo ololeyaal toos ah. Sida Jilt, Conversio sidoo kale waxay ku dalacdaa si waafaqsan qaabka qiimaha dabacsan.
Hababka ugu Fiican ee Iimayl Gaariga laga Tagay
Qaar ka mid ah dhaqamada iimaylka gaadhiga ee furaha looga tagay si aad u fiirsato:
Dir wax ka badan hal iimayl. Dhab ahaantii, waa inaad higsaneysaa inaad dirto ugu yaraan laba. Ololayaasha ugu fiican waxay ku lug leeyihiin dirista saddex iimayl (taasoo keentay celcelis ahaan 18.2% iibka dheeraadka ah). Ku dir iimaylka ugu horreeya saacada gudaheeda. Haddii aad soo dirto mid ka badan 24 saacadood, heerka beddelka waa kala badh. Ka dib, u dir iimaylka labaad 24-36 saacadood ka dib marka laga tago, iyo kan saddexaad 72 saacadood ka dib.
Bixi qiimo dhimis dheeraad ah. Ku samee qiimo dhimis weyn mid kasta oo kamid ah iimaylada. Xalalka kor ku xusan waxay awood u leeyihiin inay abuuraan kood qiimo dhimis firfircoon oo ku jira moodooyinka emailkaaga.
Waqtigu waa muhiim. Marka loo eego daraasad ay samaysay Barilliance, dirida iimaylkaagii ugu horreeyay inta lagu jiro wakhtiga ku habboon waxay keeni kartaa 20.3% heerka beddelka (marka loo eego heerka beddelka 12.2% inta lagu jiro wakhtiga aan ku habboonayn). Tani waxay sidoo kale saameynaysaa heerka beddelka ee iimaylka dabagalka ah (heerka beddelka 17.7% inta lagu jiro wakhtiga ugu wanaagsan, marka loo eego 7.7% haddii kale).
Qor mawduuc mawduuc oo ku dareensiin doona. Shakhsiyaynta (adiga oo isticmaalaya magaca qaataha iyo badeecooyinka ku talinaya waxa ay iibsanayaan) waa wax lagu dadaalo.
Ecommerce waxa uu ku raaxaysanayaa koboc cajiib ah laakiin maaha halka ugu saraysa waxa uu noqon karo, iyada oo afar meelood saddex meel ee baabuurta wax iibsiga laga tago, celcelis ahaan. Tan waxaa lagu sixi karaa iyadoo la fahmo sababta macaamiishu uga tagaan gaarigooda wax iibsiga iyo hirgelinta xeeladaha looga hortagayo dhibaatooyinka waaweyn ee shabakadaada ecommerce.
Waa maxay su'aalaha kale ee aad ka qabto ku saabsan ka tegista gaadhiga wax iibsiga? Ku dhaaf faallooyinka hoose.
11 Xeeladaha Hal-abuurka leh ee Bartilmaameedka Facebook Isbeddellada ka dib
15 ka mid ah Kordhiyada Chrome ee ugu Wanaagsan Suuqgeeyayaasha Warbaahinta Bulshada